Dhagayso Labo wasiir oo Galmudug iska casilay – Radio Daljir
Dhagayso Labo wasiir oo Galmudug iska casilay
Oktoobar 22, 2016 8:54 g 0
Cadaado, Oct, 23, 2016 – Wasiiru dowladaha Wasaarada Qorsheynta Galmudug Cabdiraxman Maxamed Cisman (Sayruuq) ayaa shaaca ka qaaday inuu iska casilay xilkii uu u hayay Maamulka Galmudug. Xilli uu maanta Saxaafada kula hadlay Magaalada Cadaado ayuu sheegay in uu iska casilay Xilkii uu u hayay maamulka Galmudug oo uu sheegay in ku dhawaad halsano iyo bar uu xilkaasi hayay.
Cabdiraxman Maxamed Cisman ayaa sheegay in awoodii maamulka ay gacanta u jirto shaqsiyaad gaar ah ,kuwaa soo ku sugan magaalada Cadaado.
Dhinaca Kalana Wasiir ku xigeenka wasaarada deegaanka ee maamulka Galmudug Cabdifitaax Maxamuud Axmed oo isna Saakay la hadlay Qaar kamid ah Idaacadaha Somalida ayaa sheegay in uu iska casilay shaqadii uu u hayay maamulka Galmudug.
Wasiirka ayaa sheegay in sababta uu shaqada iskaga casilay ay tahay mid la xariirta arimo shaqsiyadeed. Waa Wasiirkii labaad oo muddo 24 saac gudahooda sheegaya in uu iska casilay xilkii uu u hayay maamulka Galmudug. Wasiiro Badan oo ka tirsan maamulka Galmudug ayaa horay u shaaciyay in ay iscasileen Qaarkoodna waxa ay ku eedeeyeen Madaxweynaha maamulka Galmudug in uusan bixin dhaqaalihii loogu tala galay in ay ku shaqeeyaan wasaaradahooda.
Hoos ka dhagayso Hadalkii Wasiirka
Dhagayso Barnaamijka Saakay iyo Dunida Isniin 23 Oct 2016 Wariy Cabdifitaax Cumar Geeddi Daljir Studio Garowe